Wararka - Afuufa wicitaanka shirarka ka hortagga cudurrada faafa! OK wuxuu soo saaraa 200 nooc oo qalabka wax soo saarka maaskaro ah bishii!
Taxanaha Kaydka Cadka Wajiga
Sanduuqa Taxanaha Wax -soo -saarka Cadka
Taxanaha Wax -soo -saarka Tuwaalka Gacanta
Mashiinka Laabashada Cadka Wajiga Semi-Automatic
Taxanaha Kaydka Cadka Musqusha
Taxanaha Khadka Wax -soo -saarka Cadka
Taxanaha Mashiinka Samaynta Cadka
Taxanaha Qalabka Wax -soo -saarka Maaskarada ee KN95
Taxanaha Qalabka Waxsoosaarka Maaskarada Diyaaradda
Taxanaha Qalabka Xidhmada Maaskaro
R & D Iyo Warshadaynta
Afuufa wicitaanka shirarka ka hortagga cudurrada faafa! OK wuxuu soo saaraa 200 nooc oo qalabka wax soo saarka maaskaro ah bishii!
Tan iyo markii Aqoonyahan Zhong Nanshan uu CCTV ku shaaciyey infekshanka bini-aadam-ka-bani-aadamka ee CCTV bishii Janaayo 20, 2020, cudurka faafa wuxuu saameeyay quluubta 1.4 bilyan oo qof oo Shiinaha ah. Markaad fiiro gaar ah u leedahay cudurka faafa, qof walba wuxuu bilaabay inuu fiiro gaar ah u yeesho caafimaadka iyo badbaadada naftooda iyo qoysaskooda. 21 -kii Janaayo, waji -xidhka Hubei ayaa gabaabsi ahaa, ka dibna maaskaro ayaa gabaabsi ku ah guud ahaan dalka, waxayna ka maqnaayeen, taasoo keentay in been abuurku suuqa ku fatahaan.
Sanadka 2019, wax soo saarka waji -xidhka la tuuro ee Shiinaha wuxuu ahaa 4.5 bilyan oo gogo 'sanadkii, celcelis ahaan 3.2 maaskaro qofkiiba sanadkii. Maaddaama dadka Shiinuhu aysan caado u lahayn adeegsiga maaskaro maalin kasta, inta badan waji -xidhka dalkeenna waa la dhoofiyaa. Tan iyo markii uu dillaacay coronavirus -ka cusub, ku dhawaad ​​qof kasta oo iibsan kara maaskaro wuxuu xirtaa maaskaro maalin kasta. Dhacdadan ayaa dadka ka dhawaajisay baraarujin waxayna sare u qaadday wacyigooda ku aaddan is-ilaalinta. Isticmaalka maaskaro la tuuri karo ayaa sidoo kale noqon doonta xaalad caadi ah. Mustaqbalka, baahida loo qabo maaskaro la tuuri karo ee waddankeyga waa 51.1 bilyan, hoos u dhac 46.6 bilyan oo ku saleysan adeegsiga qofkiiba 10 maalmood gudahood, taas oo macnaheedu yahay in baahida ay kor u kici doonto in ka badan 10 jeer sanadkan iyo mustaqbalkaba.
Ok Teknolojiyada-alaab-qeybiyeha hormuudka ka ah qalabka china, ayaa mar kale cusbooneysiiyay rikoor!
shirkadda ugu horreysa ee warshadaha ayaa hormuud u ah ku -deeqidda RMB 1 milyan oo kaash ah.
shirkadda ugu horreysa ee cilmi-baarista warshadaha oo horumarisa khadka wax-soo-saarka maaskarada oo la tuuri karo, maaskaro la tuuro oo hal-xabbo ah, bacda xirxirida, kartoonka iyo khad-soo-saarka xirxirida kiiska.
Iyada oo laga jawaabayo baaqa xisbiga iyo dawladda, dadka OK ayaa habeen iyo maalinba ka shaqaynayay sidii loola dagaallami lahaa cudurka cusub ee coronavirus waxayna ugu dambayntii garwaaqsadeen awoodda ay u leeyihiin inay soo saaraan 200 nooc oo qalabka wax -soo -saarka maaskaro ah bishiiba si ay u daboolaan baahida adag ee suuqa.
Waqtiga dhejinta: Sep-21-2020
Aagga mashruuca Lutang xiushui park warshadaha, Jiujiang City, Gobolka Jiangxi, Shiinaha